PHOTOSHOP မှာဓာတ်ပုံကိုထုတ်ဝတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - PHOTOSHOP ကို - 2019
Photoshop မှာ Sostarivayut ဓာတ်ပုံများ
မဆိုတက်ကြွစွာအလုံအလောက် VKontakte အသုံးပြုသူစာမျက်နှာရက်နေ့တွင်စာရင်းပေးသွင်းသူများအနေနဲ့အလွန်အကျွံအမြောက်အများကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ profile ကိုများအတွက်လူကြိုက်များမရှာပါဘူးဆိုရင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကစာရင်းရှင်းလင်းဖို့သက်သက်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
လူမှုကွန်ယက် site ကို VKontakte ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ခလုတ်တစ်ခု pair တစုံကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူကိုဖျက်ပစ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုမပူဇော်မထားဘူး။ အဆိုပါစာရင်း၏ cleanup လုပ်ဆောင်ရန်သင့်အားလူ့စာရင်းသွင်းသူများမှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရဖို့ပိတ်ဆို့ခြင်းစာမျက်နှာလျှော့ချထားတဲ့လုပ်ရပ်တွေ၏နံပါတ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
subscriber များအား VKontakte Remove
လူမှုစာမျက်နှာများတွင် subscriber များအားဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်းများ။ VK.com ကွန်ယက်ကိုအလွန်အမင်းသေးငယ်နှင့်ရှိတယ်လို့သူတို့က, သေချာပေါက်အသုံးပြုသူသော့ခတ်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်စာရင်းပေးသွင်းထားသူထံမှဖယ်ရှားလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလွတ်လပ်စွာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေနှင့်သင်အတော်လေးတက်ကြွစာပေးစာယူဦးဆောင်နေလျှင်ဤအလှည့်အတွက်, သင်တို့ကိုအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကြောင့်လူအများ၏လျှော့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူစာရင်းထဲတွင်ရှိနေခြင်းသည်သင်၏အမှု၌စာရင်းပေးသွင်းထားသူများဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်အကြောင်းပြချက်သင်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာမျိုးစုံအများကြီးကျဉ်းပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးမှာ, သင်လုံခြုံစွာပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုနည်းလမ်းများ skip နိုင်ပြီးအဆုံးစွန်သို့တိုက်ရိုက်သွားပါ။
Method ကို 1: တောင်းဆိုမှုကိုနှုတ်ထွက်ဖို့
ဒီနည်းပညာ subscriber များအားဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဂုဏ်သရေရှိအသုံးပြုသူများနှင့်သီးသန့်အလုပ်လုပ်တယ်သာအထီးကျန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသက်ဆိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်အခြားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
အဆိုပါနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း SoC ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ စံဘရောက်ဇာကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေ VKontakte ကွန်ယက်။
ဖျက်ခံရဖို့စာမျက်နှာကိုသွားပါနှင့်ကိုယ်ပွားအောက်မှာအသုံးပြုသူ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "သတင်းစကားကိုပို့ပါ".
အဓိကလယ်ပြင်၌သင့်စာမျက်နှာကနေနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်ကို click ရန်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုဖော်ပြရန် "Send".
ဒါဟာလူတွေအများစုသင်၏မိတ်ဆွေများစာရင်းအပြင်ဘက်လူမျိုး၏မြို့ရိုးပေါ်မှာတစ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစွန့်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းနေကြသည်ကတည်းကမရှိသလောက်လုံလောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်အမြဲယာယီ, မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်လူတစ်ဦးကိုထည့်သွင်းမယ့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးပါနှင့်နောက်တဖန်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ဒီနည်းလမ်းကို၏မျိုးစုံဖယ်ရှားရေးကိုက်ညီခြင်းမရှိပါသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်လုံလောက်အောင်မကြာခဏသင့်စာမျက်နှာကိုသွားပါနှင့်တစ်ခုတည်း button ကိုနှိပ်နိုင်သူရိုးသားသောလူမဟုတ်ပါဘူး။
Method ကို 2: သတင်းအချက်အလက်ပုန်းခို
အတော်လေးမကြာခဏကြောင့်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုဝေမျှဖို့တွန့်ဆုတ်ဖို့ VKontakte ထံမှ subscriber များအားဖယ်ရှားခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးမလိုချင်တဲ့ subscriber များအားဖယ်ရှားပစ်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း setting များကိုအကောင့် privacy ကိုတိုးတက်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါထိတွေ့ configuration များရှိနေသော်လည်းလုံးဝမည်သူမဆိုသင့်ရဲ့ page ကိုလာနှင့်အသံဖမ်းလက်ဝဲကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖုံးကွယ်မဖွစျနိုငျသောသူအချို့နဲ့အခြား profile သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းကြည့်ရှုဘို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဲဒီ settings တွေကိုများ၏အခြေအနေများအောက်တွင်, စာရင်းသွင်းသူများကသင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုခြေရာခံဖို့ဒါမှမဟုတ်စာမကျြနှာပျေါမှာမိမိတို့အမှတ်အသားစွန့်ခွာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
main menu ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကို select, အထက်လက်ျာလက် pane ထဲကမှတဆင့် VKontakte အတွက် Sign "Settings" ကို.
စာမျက်နှာ၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်, နှင့် tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Privacy".
အားလုံးလုပ်ကွက်များတွင်စောစောပေါ် setting များကိုပြောင်းလဲပစ် "ကိုယ့်သူငယ်ချင်းများ" သို့မဟုတ် "သာလျှင်ငါ".
အားလုံးသင့်ရဲ့ subscribers တွေနဲ့အထက်ပါအဆင့်များပြီးစီးအပေါ်မှာလူမှုကွန်ယက် VKontakte ၏အဓိက features တွေရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အထူးသဖြင့်, တကကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Message သို့မဟုတ် entries တွေကိုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အခွင့်အလမ်းကိုရေးဖို့ functional ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
subscriber များအားမဟုတ်သော Third-party အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းသတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲခွင့်ဆုံးရှုံးမည်ကိုသတိပြုပါ။
Method ကို 3: အဖွဲ့ဝင်များပိတ်ဆို့ခြင်း
သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူပိတ်ဆို့ဖို့ရိုးရှင်းစွာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်စာရင်းပေးသွင်းထားသူ၏ဖယ်ရှားခြင်း၏ဤနည်းလမ်းကိုအတော်လေးအခြေခံကျကျ, အများဆုံးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အနည်းငယ်ကသွင်းထားရန်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကသင်စာပို့စာရငျးတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းသို့သော်ကို manual mode မှာတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
သော့ခတ်ထားသူ subscriber များအား၏အခန်းတွင်အဘယ်သူမျှမပြန်လာ၏အနက်ရောင်စာရင်းရာမှပြန်လာသောနိုင်ပါသည်။
ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. အခါသင်သတိထားလေ့ကျင့်ခန်းသငျ့သညျ။ ဤအသုံးပြုသူသည်ခဏသော့ခတ်ပြီးနောက် (ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်) ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျရေးသားဖို့စွမ်းရည်ရှုံးသည်။
VK.com site ကိုမှသင့်ရဲ့ username နှင့် password ဖြင့် log in နဲ့, လိုအပ်သောသည်မှန်လျှင်, သွားပါ "ကျနော့်ရဲ့စာမျက်နှာ" မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဖက်အခြမ်းအပေါ် main menu ကိုမှတဆင့်။
အခြေခံပရိုဖိုင်းလက်အောက်တွင်သတင်းအချက်အလက်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရှာနှင့်အပိုင်းကို click "စာရင်းပေးသွင်းထားသူများ".
အပိုင်းအမည်စာရင်းတွင်လူများ၏အရေအတွက်အပေါ် မူတည်. ကွဲပြားလိမ့်မည်။
ရွေးချယ်ထားသောအသုံးပြုသူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထိပ်တန်းညာဘက် Tooltip နှင့်အတူဖြတ်ကျော်လိမ့်မည် "Block ကို" - ကကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့ပြင်အဆိုပါအမည်ပျက်စာရင်းမှအသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုထည့်သွင်းဖို့ရှိမရှိမေးမြန်းခြင်း, စာရင်းသွင်းသူများစာရင်းပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်, တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, စာနယ်ဇင်းအတည်ပြု "Continue".
VKontakte အတွက်ဘုံသည်အတိုင်း, အသုံးပြုသူသည်သင်၏အလိုဆန္ဒမပါဘဲသော့ဖွင့်လို့မရဘူး, သတိပြုပါ။
သင်အနက်ရောင်စာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းသောလူ, လိုပါကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကိုတက်ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူတည်းခို, သင်အဲဒီမှာကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သျောလညျး, (1 နာရီအကြံပြုထားသည်) အရေးပေါ်အတွက်မဆိုအသုံးပြုသူအောင်အနည်းဆုံး 20 မိနစ်ခန့်တစ်ခုကြားကာလနှင့်အတူသတိပြုပါရန်အလွန်အရေးကြီးသောရှိသေး၏။
ညာဘက်ထိပ်ကသင်၏ကိုယ်ပွားကို click နဲ့သွားပါ "Settings" ကို.
ကြောင့်ညာဘက် menu ကိုမှ, ပြတင်းပေါက်သို့ပြောင်းရန် "က Black List ကို".
ပြီးသားထက်ပိုမိနစ် 20 ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်ခဲ့သူတစ်ဦးအသုံးပြုသူရှာရန်, သင်ယခုထုတ်ချင်ပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းများ "အမည်ပျက်စာရင်းထဲကနေ Remove"အဆိုပါသော့ဖွင့စာမျက်နှာလုပ်ဆောင်စေရန်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ရပ်များနှင့်အတူပြီးဆုံးပါပြီအခါ, သင်သည်သူတို့၏စာမျက်နှာပြန်လာနှင့်ပစ္စုပ္ပန်စောစော subscriber များအားနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုမိမိတို့အဘို့ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ဆက်စပ်မှုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကဝေးလံခေါင်သီလူတစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းသူများဖြစ်လိမ့်မည်, add ရန်သင့်ငြင်းဆန်နှင့်အတူ, မိတ်ဆွေများမှတဖန်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးယခုကြောင်းကိုသတိရပါ။
subscriber များအားဖယ်ရှားခြင်း၏တတိယနည်းလမ်းအရှိဆုံးအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးမကြာခဏသင်မလှုပ်ရှားသို့မဟုတ်ဝေးလံသောအသုံးပြုသူများကိုဖျက်ပစ်ချင်သော subscriber များအား၏, ဆက်ဆံရေးပုံမှန်အားဖြင့်ကန့်သတ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကြံပြုချက်များအားလုံးသည်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာနှင့်ခြွင်းချက်အခြေအနေများတွင်သင်သည်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ သင်သာအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!